Apple Watch fiarovana | Vaovao IPhone
Betsaka ny resaka tato ho ato momba ny fiarovana Apple Watch. Na dia mimenomenona aza ny mpampiasa sasany fa raha ampidirina ny kaody fiarovana dia manontany anao matetika mandritra ny tontolo andro ny famantaranandro, izay somary manelingelina satria tsy mora ny miditra amin'ny efijery kely toy izany, ankehitriny dia miseho ny olana ny Apple Watch dia tsy manana rafitra fanoherana ny halatra izay nampidirin'i Apple tamin'ny iPhone, iPad ary iPod Touch azy roa taona lasa izay, tamin'ny fanombohana ny iOS 7. Ary ahoana ny fiarovana ny Apple Watch? Inona no marina amin'izany rehetra izany?
Iray amin'ireo fanontaniana voalohany navalin'ny namantsika Samuel (@Deckard_) taminay tao amin'ny fizarana 23 amin'ny podcast anay: Marina ve fa angatahina aminao ny kaody fiarovana? Tsy azo nohamafisina kokoa ny valiny: tsia. Ny kaody fiarovana izay angatahin'ny Apple Watch (raha mbola ampiasanao azy io, mazava ho azy) dia mila miditra ao ihany ianao rehefa apetrakao amin'ny tananao ny Apple Watch. Raha tsy esorinao indray izy io dia tsy mila averinao ao intsony, mandra-panesinao ny famantaranandro ary averinao eo amin'ny tananao. Izy io dia rafitra fiarovana izay miaro ny angon-drakitrao manoloana ny fatiantoka na fangalarana famantaranandro, ary noho izany dia atoro anao tokoa
Fa tsara kokoa aza azonao atao ny manamboatra ny Apple Watch hamaha ny famantaranandro amin'ny iPhone, mampiasa Touch ID. Toy ny rehefa manokatra ny iPhone-nao ianao dia tsy maintsy mametraka ny rantsan-tànanao amin'ny fakan-tsary sy voila fotsiny, voahidy ny Apple Watch, ka tsy mila tsindrio ny isa kely eo amin'ny efijery ianao.
Tsy misy rafitra fanoherana ny halatra
Miaro ny angon-drakitrao ity kaody fiarovana ity, ary aorian'ny fanandramana 10, raha tsy ampidirinao tsara izany dia hamafana ny atin'ny famantarananao. SAINGY izay mandray azy dia afaka mampiasa azy io tsy misy olana amin'ny fampifandraisana azy amin'ny iPhone. Tsy izany no zava-misy amin'ireo fitaovana iOS izay mitaky ny lakilen'ny iCloud hampavitrika azy ireo, raha mbola manana ny safidinao Find my iPhone izay tena tsara indrindra ianao. Mazava ho azy, Apple dia afaka manampy an'ity safidy fiarovana ity amin'ny fotoana rehetra, ary azo antoka fa hanao izany amin'ny fanavaozana azy amin'ny ho avy izy, fa amin'izao fotoana izao dia tsy tafiditra ao. Mandra-pahatongan'izany dia tsara ny mitandrina ny famantaranandronao toy ny hoe famantaranandro iray milanja 500 € mahery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Fiambenana Apple Watch
Mangataka izany ilay kaody rehefa tsy manana ny famataranandro amin'ny tananao ianao ary mikasika ny efijery ianao, amin'izay dia afaka mamoha azy ianao, ary rehefa mametraka azy eo an-tànanao dia hangataka izany izy ary tsy hanontany anao intsony raha mbola eo am-pelatananao io.
Miala tsiny fa nividy Apple Watch efa niasa aho ary nametraka ny kaody fidirana ary mangataka ahy foana ny hametraka azy io na dia apetrako eo amin'ny soratako aza mety ho simba izany satria sahirana be ihany koa aho amin'ny fampandrenesana tonga amiko fotsiny rehefa mandeha ny efijery fiambenana